Amarhe malunga neMeizu Pro 7 entsha sele ejikeleza kwinethiwekhi | Iindaba zeGajethi
UMeizu akafuni kuphulukana nomhlaba kolu rhwebo luqinileyo lwe-smartphone kwaye nangona kuyinyani ukuba sithetha ngokuvuza kunye namahemuhemu ngaphandle kwento engaphaya koko, Ukucaciswa kwe Meizu Pro 7 entsha Sele zibonakala kwiwebhu. Kule meko, inethiwekhi yoluntu yaseTshayina iWeibo yindawo apho ezi zinto zichaziweyo ziye zavuza khona kwaye nangona kuyinyani ukuba iMeizu Pro 6s ineeveki ezimbalwa, uloliwe akayeki kolu phawu kwaye ibisele icinga Okulandelayo.
Eyona nto iphambili malunga nokuvuza kukuba esi sixhobo siza kuphelelwa zizakhelo kumacala escreen, into esineengqondo ezintsha ngayo ngeXiaomi Mi Mix. Kodwa ngeli xesha Ikhamera yangaphambili lelinye inqaku lokuqwalaselwa kule Meizu inokwenzeka kuba inokurhoxiswa ngokupheleleyo kwaye kuyakwenzeka ukuyifihla okanye ukuyisusa xa siyifuna. Inzwa yayo yi-8MP kwaye ngokuqinisekileyo ibonakala ngathi inomdla kwisixhobo esongeza ikhamera ye-12MP ngasemva kunye nescreen se-5,62-intshi Super AMOLED.
Kwelinye icala kuthiwa inzwa yeminwe yayo yi-ultrasonic, oko kuthetha ukuba ukhuseleko kunye nokusebenza kwayo kuyonyuswa, iyafana naleyo yeXiaomi Mi5s kwaye inokuphakamisa I-chip ye-Kirin 960 ukongeza malunga ne-6GB ye-RAM. Le Meizu Pro 7 intsha inokongeza uhlobo lwe-64 okanye i-128 GB yokugcina kwaye kulindeleke ukuba iboniswe ngaphambi kokuphela kwalo nyaka, abanye bathi ukuphela kukaDisemba, kodwa isenokuba ngaphambili. Intengiso iza kuza kamva kwaye Ixabiso liza kuqala malunga nama-euro angama-450 malunga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Amarhe malunga neMeizu Pro 7 entsha sele ejikeleze kwinethiwekhi